Lilia Podkopayeva: जीवनी, व्यक्तिगत जीवन, उपलब्धिहरू र रोचक तथ्य
Lilia Podkopayeva, लेख मा वर्णन गरिएको छ जो जीवनी - यो जसको नाम इतिहास छ एक महिला, छ। खेलाडीहरूलाई को संग्रामहरू जीतेको एक भन्दा बढी पुस्ता गर्व हुनेछ। सिपालु चाल gymnasts चाँडै उनको अनुयायी दोहोरिन हुनेछ।
जन्म Podkopaeva Liliya Aleksandrovna युक्रेनमा डोनेट्स्क शहर (त्यसपछि सोभियत संघ) मा (जीवनी बाहिर सेट तल) अगस्ट 15, 1978। उनको परिवार गरिब थियो। Crews किनभने आफ्ना पिता तिनीहरूलाई छोडेर, अलिकति लिली जन्म थियो समय छ, भविष्यमा आमा र हजुरआमा ल्याए। बाल्यकाल देखि, भविष्य व्यायाम गर्ने व्यक्ति को सानो केटी मा ऊर्जा पूर्ण स्विंग थियो, धेरै बेचैन थियो। रूपमा पछि लिली आफु यसो भन्नुभयो: "मेरो आमा, सबै म किंडरगार्टन टाढा चलिरहेको थियो समय मलाई के थाहा थिएन, बाइक मा एक दौड चलाए, म, म छतों मा चलिरहेको थियो सबै समय थियो र त्यसपछि रूखहरू भन्दा माथि हटाइयो, केटाहरु संग खेल्दै क्याच-अप, र एक ठाउँमा बस्न सकेन दोस्रो गर्न। "
केही चर्चा पछि, Podkopayeva परिवार यस्तो शुल्क खर्च ऊर्जा बर्बाद छैन पर्छ भनेर निर्णय गरे। तसर्थ, केटी खेल खण्ड दिन निर्णय गरे। 1983 मा, सानो लिली पहिले नै पाँच वर्षको हुँदा, उनको हजुरआमा Evelyn एम उनको नातिनी जिम मा खेल क्लब "डायनेमो" लगे। त्यो दिन देखि यो Lilia Podkopayeva को जीवन र जीवनी sporting थाले। "पहिलो पटक जिम जाँदै लागि, म उहाँले मलाई अभिन्न भाग बन्न भन्ठानेको" - उहाँले लिली आफु भन्छन्। "हामी, परिणाम मा काम गर्न" - यी शब्दहरू भविष्यमा च्याम्पियन को हजुरआमा को कोच गर्न लागे। यी शब्दहरू सुनेपछि, साना केटी मन तिनीहरूलाई लिएर आफु कुनै तरिकामा यसलाई मा आफ्नो परिवारको आशा र विश्वास धोका प्रतिज्ञा गर्नुभयो।
प्रशिक्षण र खेल
लियो राशिफल - Lilia Podkopayeva, जीवनी उनको प्रशंसक धेरै रुचि छ। Lviv को एक विशिष्ट सुविधा - पहिलो हुन तिनीहरू सबै को सबै भन्दा राम्रो हो कि सबैलाई प्रमाणित गर्न जीत सबै को इच्छा इच्छा, जीवन को स्तम्भ पकड। यो प्रारम्भिक बाल्यकाल देखि यी गुणहरू छ र Lilia Podkopayeva थियो, उनको जीवनी यो पुष्टि गर्छ। त्यो सधैं एक मुट्ठी मा इच्छा संकलित र आफ्नो लक्ष्य गर्ने प्रयास भएको थियो।
व्यायाम मा आफ्नो पहिलो प्रशिक्षण आउनुभएका, र छक्क trainers प्रतिभा थियो, तर चाँडै सबै आफ्नो मेहनत र लगनशील भई लागिरहेमा प्रहार अलि पाँच वर्ष पुरानो केटी, यद्यपि। धेरै छोटो समय पछि, खेल gymnasts जीवनको मुख्य घटक को एक भएको छ।
सबैलाई खेलाडीहरूलाई जीवन अविश्वसनीय जटिल छ, र Lilia Podkopayeva को जीवनी कुनै अपवाद थियो थाह छ। हरेक दिन, केटी माथि भेला गर्न र एक बिहान कसरत लागि उम्कन, त्यसपछि जाँदा नास्ता र स्कूल चलान भीड मा, बिहान पाँच मा उठाउनका लागि बाध्य भएको थियो। स्कूल केटी स्कूल कैंटीन मा भोजन भइरहेको र साँझ प्रशिक्षण लागि भाग्यो पछि। घर, थकित र थकित, त्यो साँझ मात्र नौ फर्के, र वास्तवमा अझै पनि विद्यालय गृहकार्य गर्न आवश्यक छ। राति अबेर, लिली ओछ्यानमा भयो, र बिहान सबेरै सबै फेरि माथि सर्कलमा भाग्यो। त वातावरण किशोरी धेरै छक्क परे: "कसरी यो अझै पनि यस्तो भार देखि थकित गिर छ जहाँ यो यति धेरै धैर्य र लगनशील भई लागिरहेमा?"
पछि व्यायाम गर्ने व्यक्ति त्यो त धेरै संयोजन गर्न बन्द गरेको छ कसरी त्यो थाहा छैन, कि तर लगनशील भई लागिरहेमा र कठिन काम सधैं सफलता उनको नेतृत्व छ स्वीकारे। Lilia Podkopayeva कुनै पनि खेलाडी मात्र होइन ठूलो सम्मान, तर पनि धेरै कठिन थियो जो ओलम्पिक आधार, मा काम गरे। मात्र नयाँ वर्षको खेलाडीहरूलाई एक बाँकी दिइएको थियो। एक हप्ता तिनीहरूले घर जान र परिवारका साथ समय खर्च गर्न अनुमति थिए। तर ती वर्ष मात्र सप्ताह थिए।
Podkopaev प्रशिक्षित समय सबै बाँकी। प्रशिक्षण दिन 8 घण्टा लामो, तर भविष्यमा च्याम्पियन, आफ्नो दाँत gritting, आफ्नो लक्ष्य गए। त्यतिबेला यो गर्मी छुट्टी र आराम छुट्टी गर्न odnogodok समय थाल्दा, सांस्कृतिक राजधानी मा खेल सुविधाहरु लागि बाँया जवान खेलाडी। त्यो सेन्ट पीटर्सबर्ग शुल्क प्रेम गर्नुभयो। यो समयमा, केटी जन्मदिन को हिसाब। कोच हिड्ने र सेन्ट पीटर्सबर्ग को सुन्दर वास्तुकला प्रशंसा, शहर को संग्रहालयहरु गर्न समूह नेतृत्व।
त्यो 1993. Lilia Podkopayeva मा ठूलो रंगशालामा मा उनको debut गरे। यो उल्लेखनीय घटना को एक नयाँ जीवनी छ। यो व्यायाम मा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरु थियो। त्यहाँ ठूलो क्षितिज खुलेको पहिलो पटक, त्यो पहिलो ठूलो दर्शक अगाडि, मर्यादा यो प्रतियोगिता मा नै प्रस्तुत संग प्रदर्शन र गर्व। अरू के Lilia Podkopayeva एक संक्षिप्त जीवनी भन्नेछु? उनको जीवन देखि रोचक तथ्य तल वर्णन छन्।
1995 मा Lilia Podkopayeva युरोपेली कप मालिक भए र कलात्मक कसरत मा निरपेक्ष विश्व च्याम्पियन को शीर्षक जित्यो।
1996 मा, यो युक्रेनी व्यायाम गर्ने व्यक्ति युरोपेली च्याम्पियनसिप मा सुन जित्यो।
को ओलम्पिक - यी सबै उपलब्धिहरू र संग्रामहरू जीतेको पछि लिली नै निम्न लक्ष्य छ। उनको कोच द्वारा समर्थित युवा खेलाडीहरूलाई को लक्ष्य: लिली Pugacheva Galina Losinskaya ओलेग Ostapenko र Svitlana Dubová। यो एक धेरै गम्भीर कदम थियो। लिली, मात्र आफूलाई तर पनि आफ्नो देश दुनिया मञ्चमा खडा थियो पछि। यो ठूलो उपलब्धि लागि कडा प्रशिक्षण, मेहनत मार्फत र एक विशाल मानसिक र शारीरिक लागत माथि 13 वर्ष को लागि एक व्यायाम गर्ने व्यक्ति थिए।
Xxvi ओलम्पिक खेल अटलान्टा, संयुक्त राज्य अमेरिका मा आयोजित गरिने थियो। युवा खेलाडीहरूलाई लागि यो जीवनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थियो। तर अटलान्टा Lilia Podkopayeva हजुरआमा गर्न प्रस्थान अघि एक महिना भयो। यो 13 वर्ष पहिले Evelyn एम थियो खेल मा एक पाँच वर्षको केटी परिणाम, यो सबै भन्दा Lisle भरोसा छ र सँगसँगै उनको समर्थित, र यो खेलाडी आफु भन्दा कम छ, उनको नातिनी पर्खिरहेका ओलम्पिक खेल गए। परिवार शोकमा बावजुद Podkopaev त्यो अझै पनि साहस उठे र संयुक्त राज्य अमेरिका गए दिनुभयो छैन अप। घटना होस्ट जो हल "Georgia डोम", मा, जवान Olimpiyki 45 हजार दर्शक, तिनीहरूलाई बीच अमेरिकी राष्ट्रपति को ताली संग अभिवादन बिल क्लिंटन र तिनको परिवार।
अटलान्टा ओलम्पिक खेल मा Lilia Podkopayeva दुई सुन पदक जित्यो। व्यायाम "को 180 °» एक बारी संग डबल अगाडि somersault - यो crowning व्यायाम Lilia Podkopayeva छ। अब सम्म, संसारमा कुनै खेलाडी दोहोरिनु सक्दैन! आफ्नो सफलता आफ्ना मृतक हजुरआमा लागि पोडियम मा खडा, एक व्यायाम गर्ने व्यक्ति धन्यवाद त्यो स्वर्गबाट आफ्नो विजय देख्न सक्ने आशा।
खेल Lilia Podkopayeva देखि retiring पछि के गर्ने? जीवनी, धेरै धेरै रुचि राख्नु प्रसिद्ध खेलाडीहरूलाई को व्यक्तिगत जीवन। त्यो एक कोच रूपमा काम थियो ज्ञात छ। यसलाई संसारभरि व्यायाम बच्चाहरु सिकाउँछ। उनको विद्यार्थीहरू बीच Madonna र एन्टोनियो Banderas को बच्चाहरु थिए। यो बच्चाहरु मात्र खेल कौशल तर पनि willpower र आत्मा educates।
लिली अमेरिका मा उनको खेलहरु ब्रान्ड शुरू। त्यो "यस वर्षको नारी।" नाम थियो पनि व्यायाम गर्ने व्यक्ति एड्स विरुद्ध लड्न सक्रिय भाग लिन्छ र एक संयुक्त राष्ट्र सद्भावना राजदूत भएको छ।
Lilia Podkopayeva टेलिभिजन श्रृंखला "Lesya + रोम" मा मनोरञ्जन खिच्नुभयो। त्यो "मलाई बलियोसँग होल्ड" फिल्म आफु प्ले।
उहाँले व्यवसायी Timofei Nagorny गर्न विवाह भएको थियो। Lilia Podkopayeva दुई छोराछोरी छन्। अपनाए छोरा Vadim र नागोर्नो आफ्नै छोरी Karolina Nagornaya। तिनीहरूले लामो व्यायाम गर्ने व्यक्ति साथी भएको रूपमा पार साना केरोलिन, Ani Lorak भएको छ। खेलाडीहरूलाई3वर्ष देखि बच्चाहरु यो अध्ययन विदेशी भाषा बाहेक व्यायाम गर्न सुरु र नृत्य मा लगे छ।
यो के Lilia Podkopayeva छ। संक्षिप्त जीवनी, परिवार, खेल उपलब्धिहरू - यो सबै लेखमा लेखिएको छ।
Sergey Matvienko: जीवनी, परिवार र व्यक्तिगत जीवन
Maharbek Khadartsev: जीवनी र परिवार
Masha र Dasha Krivoshlyapova Masha र Dasha: जीवनी, फोटो
यस चित्रकला "को Unicorn संग लेडी" राफेइल SANTI द्वारा: विवरण, इतिहास
2011 मा सबै भन्दा फैशन जैकेट
Guf र यशै: विवाह र छोडपत्र जोडे। किन Gough र यशै Dolmatova र कि तिनीहरूले साँच्चै सँगै फेरि छन् parted?
एलसीडी "ग्रीन पार्क", "वनस्पति उद्यान": सिंहावलोकन, वर्णन, रूपरेखा र समीक्षा
हामी के ग्यारेन्टी ग्यारेन्टी?
संगठन मा संचार व्यवस्थापन: विशेषताहरु र आधारभूत सामग्री
अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय दिवस - प्रकृति संग एकता को एक छुट्टी!
खुलिरहेको आय - यो सजिलो छ!
Angelica मूल: उपयोगी गुण र contraindications
स्वादिष्ट चिकन सलाद